स्ववियु चुनावमा नेविसंघलाई जिताउन १२ क्याम्पसमा तरुण दलका संयोजक ! – ebaglung.com
स्ववियु चुनावमा नेविसंघलाई जिताउन १२ क्याम्पसमा तरुण दलका संयोजक !
२०७३ फाल्गुन १३, शुक्रबार १७:३२	Top News, थप समाचार
विशन क्षेत्री, पर्वत, २०७३ फागुन १३ । आसन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावले जिल्लाका क्याम्पसहरुको माहोल तातेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त जिल्लाका १२ ओटा क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव हुने भएको छ । त्रिविले तोकेकै मितिमा भने सदरमुकामस्थित गुप्तेश्वर क्याम्पसमा चुनाव हुने भएको छ भने बाँकी क्याम्पसहरुमा प्रशासनिक निर्णय भईसकेको छैन ।
आसन्न चुनावलाई लिएर प्रमुख तीन पार्टीनिकट विद्यार्थी संघ संगठन बिच स्ववियुको सभापति हात पार्ने कसरत भईरहेको छ । जिल्लामा सक्रिय नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार खडा गरि नेतृत्व हातपार्नेमा आन्तरिक रणनीति तयार गरिरहेका छन् ।
त्रिविले तोकेको मितिमा चुनावहुने गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा चुनावलाई लिएर आधादर्जन आकांक्षी देखिएका छन् । नेविसंघको बाहुल्यता रहेको क्याम्पसमा नेविसंघबाटै स्ववियु चुनावको लागि चारजना आकांक्षी रहेका छन् । अघिल्लो पटकको स्ववियु चुनावमा नेविसंघले पराजय बेहोरेतापनि अहिलेको स्ववियु चुनाव जित्ने निश्चित रहेको नेविसंघ गुप्तेश्वरका इकाई सभापति वरदान पौडेलले बताए ।
त्यस्तै जिल्लाका अन्य क्याम्पसहरुमा पनि नेविसंघको वर्चस्व रहेको र सोही अनुरुपको चुनावी रणनीति बनाईएको नेविसंघ पर्वतका सभापति मिलन सुवेदीले बताए ।
यस्तै आसन्न स्ववियु चुनावमा नेविसंघलाई जिताउन तरुण दल पर्वत सक्रियताका साथ लागेको छ । तरुण दल पर्वतका अध्यक्ष राज मल्ल ठकुरी तोरणले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा जिल्लाका १२ वटै क्याम्पसमा संयोजक खटाईएको र नेविसंघलाई बहुमतले जिताउन आफूहरु लागिपरेको जनाईएको छ । १२ वटा क्याम्पसमा १२ ओटा संयोजक सहित ३०० तरुणहरु परिचालन गरिएको र जिल्ला कार्यसमिति, क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर कार्यसमिति र गाउँ कार्यसमितिलाई समेत नेविसंघलाई जिताउनका लागि पहल गर्न निर्देशन दिईएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउन तरुण दलले सबै तहका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिईएको उनले हस्ताक्षर गरेको जनाईएको छ ।
पर्वतमा जनता सुदर्शन बहुमुखी क्याम्पस ठुलीपोखरी, पर्वत बहुमुखी क्याम्पस फलेवास, गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, शिवालय बहुमुखी क्याम्पस, ग्रामप्रकाश बहुमुखी क्याम्पस लेखफाँट, नवजागृत बहुमुखी क्याम्पस तिलाहार, वहाकी सामुदायिक क्याम्पस वहााकीठाँटी, पैयँु बहुमुखी क्याम्पस, महाशिला बहुमुखी क्याम्पस लुंखु, त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस शंकरपोखरी, अन्नपूर्ण बहुमुखी क्याम्पस कार्किनेटा, हुवास बहुमुखी क्याम्पस हुवास गरि १२ ओटा क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव हुने भएको छ । सबै क्याम्पसमा नेविसंघ सहित अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले उम्मेदवारी दिने जनाईएको छ ।
दमौलीमा महाशिवरात्रिका अवसरमा शिवध्वजारोहण कार्यक्रम सम्पन्न !